Ilebuli yesitika yekhwalithi entsha entsha yekhwalithi ephezulu yokulwa nomgunyathi, ilebula lesitika seChina Factory entsha ngokwezifiso yekhwalithi ephezulu yokulwa nephepha elenziwe ngabenzi, Abahlinzeki, Ifektri - IHainan Tianjian Anti-Forgery Science & amp; Technology Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Ilebula yokuphepha yekhodi ye-QR>Ilebula yokuphepha ye-QR ene-Hologram Strip
Ilebuli yesitika yekhwalithi entsha entsha yekhwalithi ephezulu yokulwa nomgunyathi
Le ilebula yokuphepha yekhodi ye-qr ihlanganiswe nezinhlamvu zomzimba ezihlanganayo kanye ne-hot stamping hologram strip, esethole ubunikazi bendabuko nobuzwe jikelele. Umbhalo ojikelezayo okungahleliwe yizici eziyinhloko zokulwa nomgunyathi, ezibhalwe ngokungahleliwe yinqubo yokukhiqiza enelungelo lobunikazi.
1. Isitayela esihle esishisayo nephethini ye-hologram sithuthukisa isithombe sakho somkhiqizo, esingakhuphula inani lomkhiqizo.
2. Ikhodi ye-QR eyingqayizivele iyatholakala ukuthi iphrintwe kwilebula yokuqinisekiswa komkhiqizo, anti-mbumbulu kanye nokuphromotha.
3.Izinhlamvu zokuphepha kulebula ngalinye lihlukile. Ngisho singenakukwazi ukwenza amalebula ama-2 afanayo.
4. Ukuskena ikhodi ye-QR ukuqinisekisa ubuqiniso ngokuhlola ukungaguquguquki kwezinhlamvu
5. Isinamatheli siyatholakala ukwenza ngezifiso ngegama lenkampani, ilogo kanye nama-barcode, ngakho-ke lokho kunezela ukuphepha okwengeziwe kwephakheji yakho ekhona.
Ilebula yokuphepha ye-holographic eguquguqukayo